Isbitaalka Ex-Digfeer Erdogan ee Muqdisho oo shaqadiisa la joojiyay sababo la xiriira baqdin laga qabo xanuunka COVID-19. - Latest News Updates
Isbitaalka Ex-Digfeer Erdogan ee Muqdisho oo shaqadiisa la joojiyay sababo la xiriira baqdin laga qabo xanuunka COVID-19.
Isbitaalka weyn ee Erdogan oo horey loo oran jiray Digfeer ee ku yaalla magaalada Muqdisho ayaa shaqadiisa la joojiyay sababo la xiriira baqdin laga qabo xanuunka COVID-19.
War qoraal ah oo lagu daabacay barta cisbitaalkaasi ku leeyahay Facebook ayaa lagu sheegay in “si looga hortago faafida Korona Fayras loona ilaaliyo badqabka Bulshada uu Maamulka cisbitaalku joojiyay la kulanka Bukaan socodka iyo sidoo kale booqashada bukaan jiifka”.
Waxa sii shaqeyn doontaa qaybta xaaladdaha degdeg ah oo qaban doonta dadka xanuunsanaya iyo kuwa dhaawaca ah balse aan lahayn caalamadaha cudurka COVID-19.
Inkastoo go’aankan uu ahaa mid indhawaalaba ay ka baaran dagayeen maamulka cisbitaalka haddana waxa jira warar soo baxay oo sheegaya in sedex dhakhtar oo cisbitaalka ka shaqaynasay laga helay fayraska korona, taasina ay go’aankan soo dadajisay. Dhawr jeer oo aan isku daynay inaan la xiriirno maamulka cisbitaalka si aan faahfaahin dheeraada u helno inooma suurtagalin
Dhakhaatiirta xanuunka laga helay ee cisbitaalka ayaa la sheegay in qaarkood ay horey ula kulmeen dad laga helay cudurka Korona Fayras taasoo keentay in iyagana baaritaano laga qaado.
Natiijada soo baxday ayaa noqotay in iyagana laga helay xanuunka isla markiibana way is gooni yeeleen sida uu BBC-da u sheegay mid kamid ah dhakhaatiirta cudurka laga helay.
Waxa jira walaac sii kordhaya oo la xiriirra in cudurku ku dhex faafayo bulshada iyadoo aanay jirin talaabooyin dheeraada oo laga qaaday isu imaatinka dadka oo la aaminsanyahay inuu kaalin weyn ku leeyahay faafidda cudurka. S
Sida uu ku soo waramaya weriyaha BBC-da ee magaalada Muqdisho suuqyada ayaa wali furan, makhaayadaha iyo goobaha la fariisto ayaa sidoodii caadiga ah u shaqaynaya iyadoo dadku si caadi ah u wataan nolol maalmeedkoodii hore.
Dowladda Soomaaliya ayaa isbuucii hore ku dhawaaqday in dhimashadii ugu horreysay ee uu sababay coronavirus.
Wasiiradda caafimaadka dawdlada federalka Soomaaliya Fowziya Abiikar Aaadan ayaa xaqiijisay in qof la xanuunsanaa coronavirus uu ku geeriyoodey gudaha Soomaaliya. Isku darka tirada guud ee cudurkan ee Soomaaliya ayaa hadda noqotay 21.